Marketing sy fankafizana bilaogy marketing | Martech Zone
Sabotsy, Janoary 16, 2010 Alarobia, Oktobra 26, 2011 Douglas Karr
Marketing Blogs dia ao anatin'ny fandaharam-potoananako mandevona isan'andro. Manaraka ireo bilaogera amin'ny marketing amin'ny Twitter aho ary manana fahana bilaogy iray tapitrisa dolara amin'ny mpamaky ahy (izay tsy haiko mihitsy). Matetika aho mamaky bilaogy ary mijanona ao anatin'ny andro vitsivitsy noho ny atiny, ny hafa novakiako nandritra ny taona maro.
Tsy mino aho fa misy bilaogy marketing iraisana 1 amin'ny Internet. Ho marin-toetra aho ary hilaza aminao fa, na dia manaja fatratra ny bokin'i Seth Godin aza aho dia tsy mpankafy ny bilaoginy mihitsy. Efa nanafatra ny bokin'i Seth vaovao aho, Linchpin: Tena ilaina ve ianao?,… Fa tsy mitsidika ny bilaoginy matetika aho. Matetika i Seth dia mamoaka baomba isan'andro tokony horesahina - fa tsy misy hevitra, tsy misy ny fifanakalozan-kevitra.
Ankasitrahako ny fahasamihafana omen'ny bilaogy marketing maro. Ny marketing dia lohahevitra maro samihafa ao aminy, manomboka amin'ny haino aman-jery nentim-paharazana, mandefa, hatramin'ny marika manokana ary haino aman-jery vaovao. Ny marketing dia misy koa ny paikady ankapobeny momba ny fandraharahana, ny varotra ary ny doka.
Tiako ny bilaogiko marketing
Raha manana bilaogy marketing ianao dia tokony samy hampihatra izay torinao ary hizara ny valiny.
Raha mampahafantatra ny mpamaky anao momba ny statistikan'ny indostria ianao dia aza hadino ny mitady porofo mifanohitra amin'izany. Matetika ny data dia aseho amin'ny fitsarana an-tendrony.
Ny bilaogy marketing dia tokony hanome ny fitaovana sy ny dingana ilaina amin'ny mpivarotra mba hanaovana fanentanana mitovy amin'izany.
Ny bilaogy marketing dia tokony hangataka ny heviny sy ny valiny ary hanome azy ireo fomba fijery ireo… na dia ireo tsy mitovy hevitra aza amin'ny fahafaha-mandefa vahiny.
Ny bilaogin'ny marketing ahy dia tsy tiako
Bilaogy marketing izay tsy mandinika, manome hevitra ary mampita vaovao fotsiny - tsy manome tanana fahaizana manokana izay tokony omen'ny bilaogy rehetra.
Ireo bilaogera momba ny varotra dia tokony hanidy ny lahatsoratra rehetra amin'ny fanekena fa nizara karazana fampahalalana mahasoa izy ireo mpivarotra… Tsy mpamaky antonony fotsiny.
Ny bilaogy marketing dia tsy tokony ho an'ny mpivarotra fa tokony ho an'ny mpanjifa, ny fizotrany, ny fitaovana, ny tetika ary ny valiny.
Ny couse, tiako koa fa misy ny mampiavaka ny Internet Marketing na Multi-Level Marketing (MLM) sy ny bilaogy Marketing amin'ny Internet. Na dia manaja ny sasany amin'ireo paikady napetraky ny mpivarotra marobe aza aho, ny orinasa mahazatra miaraka amin'ny talen'ny varotra dia tsy afaka miray amin'ny hevitr'izy ireo mihitsy. Manantena aho fa hanavaka ny tenany ireo bilaogy Marketing.
Inona avy ireo toetra hitanao tafiditra ao amin'ny Blog Marketing? Inona ny toetra mampiavaka anao maniry hiala? Inona ireo lohahevitra tianao horesahinay bebe kokoa? Manomeza hevitra momba ity lahatsoratra ity na ampiasao ny kiheba Feedback eo ankavia.